Imvelo izinto ezingadalwa umuntu, zimane zivele ngoba ziyadi
ⓘ Imvelo izinto ezingadalwa umuntu, zimane zivele ngoba ziyadingeka emhlabeni. Kubalulekile ukuba sihloniphe imvelo. Imvelo kungaba izinto ezifana nezihlahla kany ..
Ikhemistri noma Amakhemikhali iyona isiyalo yesayensi bahilelekile izakhi kanye kwakwakhe sakhiwa ye iathomu, molecule futhi ion: Ukwakheka yabo, isakhiwo, izakhiwo, indlela yokuziphatha kanye nezinguquko ababhekana nazo lapho bephendula ezinye izinto. Ngokwesilinganiso sesihloko sayo, ikhemistri ithatha isikhundla esiphakathi phakathi kwe Iphysics kanye ne ibhayoloji. Kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi yisayensi emaphakathi ngoba inikeza isisekelo sokuqonda imikhakha yesayensi eyisisekelo futhi esetshenzisiwe ezingeni eliyisisekelo. Isibonelo, ikhemistri ichaza izici ikhemistri ezitshalo ...